Ma waxaad wajahaysaa khasaare lama filaan ah oo tiro badan oo taageerayaasha Instagram ah?
Iyo sidoo kale inay dhibaato kala kulmaan aqoonsiga sababaha ka dambeeya arrintan ? si fiican, waa innaga oo kale. Waxaan had iyo jeer la yaabanahay sababta aan ugu luminayo taageerayaasha Instagram in kasta oo aan dadaalay iyo wax kasta oo aan sameeyay si aan u soo jiito kuwa raacsan.
Intaa waxaa dheer, Waxa aan gartay in dhibaato kasta xal u baahan tahay. Markaa, in this article, Waxaan kaa caawin doonaa inaad garato sababaha aad u waydo taageerayaashaada Instagram oo aan kaa caawino inaad xalliso.
Waa maxay sababta aad u lumisay taageerayaasha Instagram ?
Luminta kuwa raacsan waa qayb dabiici ah oo ka mid ah waayo-aragnimada Instagram-ka iyo habka lagu dhisayo akoonkaaga Instagram.. Qof kastaa mar walba ma qadarin doono alaabtaada, Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay sameeyaan waxqabadyo daba-gal iyo daba-gal, oo waxaad samayn kartaa uun ficillo u horseedaya dadka kale inay ku raacaan adiga oo aan ogayn.
Laakiin dhibku waa kan : sababta aan luminayo taageerayaasha Instagram-ka ? Si aan jawaab uga bixiyo su'aashan, Halkan waxaan ku siinnay 5-ta sababood ee suurtogalka ah ee aad u luminayso qaar ama badi taageerayaashaada Instagram-ka.
5 sababood oo aad ugu waayi karto taageerayaasha Instagram-ka
Instagram News Automation.	Dadka ku jira Instagram-ka waxay noqonayaan kuwo la xusho
Instagram-ka ayaa jiray muddo dheer ; tirada isticmaalayaasha ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay sanadihii la soo dhaafay iyo, sidaa darteed, Dadka intooda badan dhadhankooda nooca nuxurka ay jecel yihiin inay ku arkaan quudkooda ayaa isbeddelay.
Tani waxay tusinaysaa in laga yaabo inaad lumiso taageerayaasha Instagram sababtoo ah dhajinta waxyaabo duug ah ama aan khusayn..
Instagram News Automation.	Mar dhif ah ayaad wax ku dhejisaa Instagram-ka, ama aad u badan.
Haddii aad dareentay in tirada dadka raacsan ee Instagram ay si dhakhso leh hoos u dhacayso marka loo eego sida ay u kordhayso, Jadwalkaaga dhejinta ayaa laga yaabaa inay eedda leedahay.
Haddi aanad inta badan soo dhejin, macaamiishu ma heli doonaan fursad ay ku akhriyaan nuxurkaga warkooda, taasoo sababi karta inay mar dambe ku raaci waayaan. Dhanka kale, haddii aad marar badan soo dhejiso, maalintii lix jeer dheh ama ka badan, waa caajis waxayna sababi kartaa macaamiishaada inay joojiyaan raacitaankaaga.
Instagram News Automation.	Aragtida koowaad ma habboona
Aragtida koowaad waa aasaas, markaa ka digtoonow inaadan kharribin ! Si kastaba ha ahaatee, ka sokow sawiradaada, Shayga ugu horreeya ee taageerayaasha cusub eegaan waa noolahaaga, markaa hubi inaad ku buuxiso tixraacyo ama xigashooyin lagu kalsoonaan karo.
4.	Hufnaan la'aanta iyo Joogteynta Mawduuca
Haddi warkaagu yahay mid caajis ah, oo leh sawiro kala duwan, midabyo iyo midabyo aan is-waafaqayn iyo tayada sawirka isbedbeddelaya, waxaad halis u tahay inaad damiso kuwa raacsan. Dhanka kale, haddii aad leedahay nuxur gaar ah iyo xubno joogto ah, waxaad si dabiici ah u kasban doontaa kuwa raacsan waqti yar gudaheed. Markaa iska hubi inaad ciyaareyso inta aad joogtaynayso.
5.	Qoraallo caajis ah ama aan rafcaan lahayn
Sawirro yaab leh ayaa kicin kara xamaasadda kuwa raacsan, laakiin qoraallada soo jiidashada leh ayaa soo jiita dareenka akhristayaashaada. Sidaa darteed, haddii qoraalladaadu yihiin kuwo caajis ah ama aan soo jiidasho lahayn, macaamiishaadu way caajisi doonaan waxaana laga yaabaa inay sidoo kale ku raaci waayaan.
5 siyaabood oo lagu hagaajin karo
Instagram News Automation.	Noqo mid dabacsan oo la qabsiga Isbedelka
Isbeddelku waa lama huraan, gaar ahaan dunidan soo koraysa iyo Instagram-ka. Markaa baro inaad la qabsato isbeddellada cusub oo noqo mid dabacsan sida aad ula dhaqanto.. Abuur oo wadaag nuxurka isbeddelaya iyo mawduucyada quudintaada, waxaadna shaki la'aan heli doontaa tiro badan oo raacsan.
Instagram News Automation.	Hayso Mawqif dheeli tiran oo joogto ah
Sida aad si joogto ah ugu dhejiso quudintaada, Taageerayaashaadu waxay bilaabi doonaan inay wax bartaan oo ay xitaa aad u yaqaanaan nuxur kasta, gaar ahaan haddii ay tahay mid soo jiidasho leh. Markaa, yeelato hawlo dheeli tiran oo joogto ah 1 ilaa 2 dhejis maalintii, tirada dadka raacsana way kordhi doontaa.
Instagram News Automation.	Profile la aqoonsan yahay
Way fududahay : waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa sawirro indho qabad leh oo tayo leh, iyo sidoo kale tixraacyo iyo shahaadooyin sumcad leh oo ku yaal profile kaaga. In sidan, dadka ku raacaya waxay rabaan inay ku raacaan.
4.	Ku Wanaagsan oo Ku Sax Mawduucaga
Beddelidda nuxurka inta badan waa xanaaq. Sidaa darteed, Hayso macluumaad sax ah marka aad ku dhejinayso Instagram ; ku joog hal mawduuc oo ciyaar ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, waad wax ka beddeli kartaa macluumaadkaaga iyadoo lagu saleynayo dhacdooyinka jadwalka taariikhda., sida Maalinta Jacaylka iyo kuwa kale.
5.	Samee Halyey Xiiso Leh
Hal sawir oo keliya kuma filna in la ururiyo taageerayaasha ; sidoo kale waxaad u baahan tahay halyeey. Haysashada qoraalo xiiso leh waxay kaa caawinaysaa inaad soo jiidato oo ku hayso taageerayaal badan akoonkaaga. Tani waxay lagama maarmaan u tahay dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada, hadaba samee halyeyga kicin doona xiisaha taageerayaashaada hadda iyo kuwa mustaqbalkaba.
Maqaal horeSida Lacag Looga Sameeyo Instagram La'aan Kuwa raacsan 2021 : 9 Siyaabaha Loo Sameeyo
Maqaalka XigaSida loo soo dejiyo fiidiyowyada Instagram-ka iPhone-kaaga : 3 Hababka iyo Codsiyada